Nhanho nhanho kugadzira menduru dzeZuva raAmai | Mhizha On
Nhanho nhanho kugadzira menduru dzeZuva raAmai
Irene Gil | | Crafts, Mapepa emhizha, Maoko ezuva raamai, Mhizha yevana, Zviitiko zvakakosha
Mune izvi Tutorial Ini ndinokudzidzisa iwe kugadzira mapepa menduru, yakakwana kuita vana. Zvino izvo izvo Zuva raamai Ivo vanogona kuzvijairira ivo kuti vape imwe neimwe kuna mai vavo. Ivo vanogona kuipa zita kana chirevo, uye vanoshandisa chero mavara ivo avanoda.
Kugadzira ivo menduru for the Zuva raamai iwe unozoda zvinotevera zvinhu:
Pepa rine mavara kana kadhibhodhi
Ngatitangei nekugadzira iyo yakatenderera chikamu of the menduru. Kuti uite izvi unofanirwa kucheka a bvisa bepa kana the kadhibhodi yemuvara wawakasarudza. Iyo upamhi inoenderana nekukura kwaunoda kuti medari yako ive Uye kureba kunofanira kuve kanenge 50cm. Kana bepa rako risina kureba kudaro unogona kugadzira micheka miviri, usazvidya moyo, isu tinozvinamatira pamwechete. Iwe unofanirwa kupeta mitsetse yemapepa sekunge yaive akodhiyoni. Danga rimwe kune rumwe rutivi, rimwe kune rimwe, zvichingodaro kusvika kumagumo.
Namatidza mumwe mugumo kune mumwe kuvhara a denderedzwa, sekunge yaive imwe mhando yesiketi. Paunenge uine zvakadaro, pusha pasi pasi, iwe uchaona kuti inobhururuka kunze uye kune denderedzwa neaconcion folds.
Zvino ngatiitei iyo denderedzwa repakati. Cheka denderedzwa re kadhibhodi idiki pane iyo kodhoni yawango gadzira. Namira pakati. Kuti uwedzere kushongedza unogona kudhirowa mifananidzo kutenderedza kumucheto.
Nguva yekubata iyo ribhoni rekushongedza. Cheka mitsetse miviri uye unamire iwo mune inverted V chimiro kubva kumashure. Vanofanira kuwira pasi. Chengetedza magumo ekupedzisira akanaka.
Pakupedzisira, nyora pakati iyo shoko kana the Nombre zvaunoda.
Uye uchave neyako menduru yakasarudzika kupa kana kushongedza. Iwe une zviuru zvemagadzirirwo akasiyana ane akawanda akasiyana mavara epepa, ribhoni uye mamaki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Nhanho nhanho kugadzira menduru dzeZuva raAmai
Maitiro ekugadzira iyo diaper keke yemwana mucheche kana chipo chemwana.
Maitiro ekugadzira iyo chirongo chekudzikama mune yakapusa uye yakapusa nzira.